Myanmar Java User: Myanmar Unicode
JDC Live Lessons
ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အသုံးပြုနေကြသော ကွန်ပျူတာများအပေါ်တွင် စာလုံးများကို တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် သက်မှတ်ထားသော ကွန်ပျူတာလောက၏ စနစ်တစ်ခု ဖြစ်၏။
ကွန်ပျူတာများသည် စာလုံးများကိုဖော်ပြနေနိုင်သော်လည်း အတွင်းပိုင်းတွင် စာလုံးများကို စာလုံးများအတိုင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်မဟုတ်။ ကွန်ပျူတာက အသုံးပြုနိုင်သော ဘိုင်နရီဒေတာများ အနေဖြစ် သိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိ၏။ ထိုဘိုင်နရီ ဒေတာများကို ဂရပ်ဖစ်စာလုံးများ အနေဖြစ် ပြောင်းလည်း ဖော်ပြပေးခြင်းဖြင့် လူသားများက သိရှိနိုင်သော စာလုံးများ စာကြောင်းများကို ကွန်ပျူတာအပေါ်တွင်ဖော်ပြ ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ အထက်ပါ ဂရက်ဖစ်စာလုံးများကို ဖောင့်ဟုခေါ်ဆိုပြီး စာလုံးများအား ကွန်ပျူတာမှနားလည်သော ဘိုင်နရီဒေတာများ အဖြစ် ပြောင်းလည်းခြင်းကို အန်ကုဒ်ဒင်းန်ဟု ခေါ်ပါသည်။ တဖန် အန်ကုဒ်လုပ်ထားသော ဘိုင်နရီဒေတာများအား စာလုံးများအဖြစ်ပြောင်းလည်းခြင်းကို ဒီကုဒ်ဒင်းန်ဟု ခေါ်၏။ အထက်ပါ အန်ကုဒ်ဒင်းန် လုပ်ခြင်းဒီကုဒ်ဒင်းန်လုပ်ခြင်းများကို စုပေါင်း၍ အန်ကုဒ်ဒင်းန်စနစ်ဟု ခေါ်ဆိုလေ့ရှိ၏။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအသီးသီး၊ လူမျိုးအသီးသီးက ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနေကြ၏။ ကနဦးခေတ်က ဘာသာအသီးသီးက စာလုံးစုအသီးသီးနှင့် အန်ကုဒ်ဒင်းန်စံနစ် အသီးသီးကို ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် စာလုံးများကို ဖော်ပြလာခဲ့ကြ၏။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုမှ အခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုဆီသို့ အချက်အလက် များ ဆက်သွယ်အသုံးချရာတွင်၎င်း၊ ကွန်ပျူတာတစ်ခုအပေါ်တွင်ရှိသော စာများကို အခြားသော ကွန်ပျူတာ အပေါ်တွင် ဖော်ပြရာတွင်၎င်း စာလုံးစုတစ်ခုမှ စာလုံးစုတစ်ခုကို ပြောင်းလည်းခြင်းဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်လာခဲ့ကြ၏။
သို့ရာတွင် အင်တာနက်ကို စတင်အသုံးပြုလာသည့် အခါတွင်ဘာသာအမျိုးမျိုး၏ စာလုံးများကို အန်ကုဒ်ဒင်းန်စံနစ် အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းလည်း၍ဖော်ပြနေသည်မှာ အစဉ်ပြေလှသည်မဟုတ်ပေ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုး၏ စာလုံးများကို တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြင့် အန်ကုဒ်ဒင်းန် လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်လာခဲ့၏။
အထက်ပါလိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်ခဲ့သည်မှာ ၁၉၈၄ခုနှစ် ISO စာလုံးနှင့်ကုဒ် စံနစ်ပြုရေး ကော်မတီမှ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးပြုနေသော စာလုံးစုများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုနိုင်သော အန်ကုဒ်ဒင်းန်စနစ် (ISO 10646) ကို စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ခု၉လပိုင်းတွင် Unicode Draft1 ကို စတင်ထုတ်ပြန်လာနိုင်ခဲ့၏။ ထိုမှတဆင့် ၁၉၉၁ခု၁လပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Unicode Final Draft ကို ထောက်ခံခဲ့သော လုပ်ငန်းများက ပူးပေါင်းပြီး ယူနီကုဒ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး၊ ယူနီကုဒ်စနစ်ချမှတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးများကို အထက်ပါအဖွဲ့အစည်း၏ လက်အောက်တွင် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြ၏။
ဤနည်းအားဖြင့် ကျွှန်တော်တို့သည် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး၏ စာလုံးအမျိုးမျိုးကို မည်သည့် ကွန်ပျူတာများ ပေါ်ကမဆို အန်ကုဒ်ဒင်းန်စံနစ်အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းလည်းစရာမလိုပဲ တူညီစွာ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဖော်ပြလာနိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏။
အထက်ပါအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ယူနီကုဒ်ဟုဆိုသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အန်ကုဒ်ဒင်းန်စနစ်သည် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရ၏။ ကျွှန်တော်တို့ မြန်မာစာသည်လည်း အများနည်းတူ ယူနီကုဒ်နှင့် ပတ်သက်လာ ခဲ့ရပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွှန်တော်တို့ မြန်မာစာမှာမူ အများနှင့် မတူ တမူထူးခြားခဲ့၏။ ဤနေရာတွင် Why Unicode ဟု ခေါင်းစဉ်တင်ထားပြီး မြန်မာစာအတွက် ဘာကြောင့် ယူနီကုဒ်ဟာ အရေးကြီးသလဲ ဆိုသည်ကို လွယ်ကူစွာ ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။
ကျွှန်တော်သည် ကွန်ပျူတာကိုစတင် အသုံးပြုဘူးသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်မှဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် မြန်မာစာကို ရိုက်ရမှန်းထက် ကြည့်၍ရသည်ဟုတောင် မသိခဲ့ပါ။ မြန်မာပြည်တွင်း အဲ့ဒီလောက် ကွန်ပျူတာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေသည်ဟုလည်း မထင်မိဘူးပါ။ သို့ရာတွင် လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်ခန့်က မြန်မာပြည်က ရောက်တာမကြာသေးသော ညီသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အိမ်ကို သွားလည်မိတော့မှ သိရပါတော့သည်။ ချတ်အခန်းတွေ ပြည့်နေတာပဲ။ ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ကြတာလဲ တဖျောင်းဖျောင်းနဲ့။ တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့။
ဘယ်ရမလဲ မြန်မာ သတင်းတွေ ဖတ်ရတော့မယ် ဆိုပြီး ကျွှန်တော်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်း မြန်မာဖောင့်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ် ပါတော့သည်။ ဝင်းအင်းဝ ထင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အချို့သော ဆိုဒ်များကို ကြည့်၍မရပါ။ ဒါနဲ့ ထိုညီလေးကို မေးကြည့်ရပါသည်။
"ငါမြန်မာ ဖောင့်တော့ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားတယ်ကွ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေကြတော့ ကြည့်လို့ မရဘူးကွလို့။"
"မဟုတ်သေးဘူး၊ အကိုရ၊ အကိုဘာဖောင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတာလဲ"
"မြန်မာဖောင့်လေကွာ၊ ငါလဲ http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Myanmar.html က ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားတာ"
"မဟုတ်ဘူး အကို၊ ဇော်ဂျီကို သုံး၊ အတော်များများက ဇော်ဂျီပဲသုံးတာ"
"မင်းဟာက မဟုတ်သေးပါဘူးကွာ၊ ဖောင့် နဲ့မဆိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်"
ကျွှန်တော် ငြင်းလိုက်ပါသေးသည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုရင် ကျောင်းပြီးလို့ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး ထမင်းစားနေတာ လေးငါးနှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ကျွှန်တော်နားမလည်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဖောင့်မတူလို့ ကြည့်လို့မရတာ ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကြုံဘူးတာ။ ဒါပေမယ့်လည်း အစဉ်ပြေသွားပါ သဖြင့် သိပ်ပြီး မတွေးဖြစ်တော့ပါ။ အလုပ်ရှုပ်ပေမယ့် ဖောင့်တစ်ခုနဲ့ ကြည့်မရရင် တစ်ခုခုပြောင်းကြည့်ပြီး၊ မရသေးရင် ထပ်ရှာပြီး အင်စတောလုပ်ရင်း စက်ထဲမှာ မြန်မာဖောင့်တွေ အတော်များလာပါသည်။
သည်လိုနဲ့ ကျွှန်တော်လည်း ဟိုရှာဒီရှာ ဟိုသတင်းဖတ် ဒီသတင်းဖတ်နဲ့ မြန်မာအိုင်တီပရို ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကိုသွားတွေ့ပါသည်။ အဲ့ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ ယူနီကုဒ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ဖတ်ပြီးတော့မှ မြန်မာယူနီကုဒ်ရဲ့ အခြေအနေကို နားလည်လိုက်ရပါသည်။
ကျွှန်တော်သုံးနေခဲ့သော ဇော်ဂျီသည်ယူနီကုဒ်မဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရပါတော့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယူနီကုဒ်ဆိုပြီးယူနီကုဒ်ကချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို မလိုက်နာလို့ပါ။ အကယ်၍သာ စာလုံးဒီဇိုင်းတီထွင်သူတွေကသာချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစီးကမ်း တွေကို လိုက်နာခဲ့မည် ဆိုလျှင် ဘာဖောင့်နဲ့ရေးရေး အဓိပ္ပါယ်တူညီစွာ တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်၏။
အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဇော်ဂျီကို သုံးစွဲခြင်းကို ရပ်နားပြီး ယူနီကုဒ်ကိုသာ အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ လက်တလော အစဉ်ပြေနေပေမယ့် မြန်မာစာတိုးတက်ရေးကို ဆုတ်ရုတ်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ယူနီကုဒ် စီးကမ်းများကို မလိုက်သော ဖောင့်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
စာလုံးများကို အစီအစဉ် သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ အစဉ်မပြေဘူး
မြန်မာစာဟာ ဝင်းဒိုးထဲမှာ တရားဝင်မရှိဘူး
ဘာလုပ်လုပ် ကရက်လုပ်နေရတဲ့အတွက် သခိုးတွေလိုဖြစ်နေတယ်
Font Embedded တွေ Font Changer Script တွေကို သုံးပြန်ရင်လည်း မလိုအပ်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေရတဲ့အတွက် အလကားနေရင်း လေးနေတတ်သည်
Font တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု နေရာမတူတဲ့အတွက် ဘာသာပြန်လည်း ကောင်းကောင်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူး
နောက်ဆုံး မြန်မာကွန်ပျူတာလောက တိုးတက်မှု့အပေါ်မှာ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်
အဲ့ဒီအတွက် ယူနီကုဒ်ကိုသုံးရင် ဘာတွေကောင်းလာမယ် ဆိုတာသိနိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံးဗျာ ဝင်းဒိုး၈နဲ့ ပန်းသီးကွန်ပျူတာက Lion OS မှာ ယူနီကုဒ်ကို သုံးတဲ့ မြန်မာစာလုံးတွေကို ပံ့ပိုးပေးတော့မည် ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဘရောင်ဇာတွေထဲက ဘာသာစကား နေရာတွေမှာ မြန်မာစာကို ရှာတွေ့လာတော့မည်။
ခေတ္တအစဉ်ပြေမှု့အပေါ်မှာ အလိုက်မှားခြင်းမရှိပဲ ရေရှည်ကို ကြည့်သင့်သည် ဟုထင်ပါသည်။
ဘယ်အချိန်ကစပြီး မြန်မာယူနီကုဒ်ကို စတင်အသုံးပြုသင့်ပါသနည်း။ ချက်ချင်းပင်ဖြစ်၏။ ကျွှန်တော်တို့သည် မသိခဲ့သောကြောင့်စနစ်မကျသော စာလုံးများကိုအသုံးပြုလာခဲ့ကြ၏။ မှားမှန်းသိလျှင် ချက်ချင်း ပြုပြင်သင့်ပါသည်။ အများမိုးခါးရေသောက်လို့ လိုက်သောက်နေမည်ဆိုလျှင် အမှားမှာပြီးဆုံးမည် မဟုတ်ပေ။ ကျွှန်တော်တို့ မြန်မာစာကွန်ပျူတာစနစ် တိုးတက်ရေးအတွက် ချက်ချင်းပင် ယူနီကုဒ်ဖောင့် များကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ တဖန်နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေများကိုလည်းယူနီကုဒ်ဖောင့်များကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် လမ်းညွှန်ပေးသင့်ပါသည်။
တတ်နိုင်သူများကလည်း အခြားသောဖောင့်များဖြင့်ရေးသားထားသော ဖိုင်များကို ယူနီကုဒ်ဖိုင်များအဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲများကို ရေးသားပြီး မျှဝေသင့်ပါသည်။
မြန်မာယူနီကုဒ်များကို ဘယ်မှာရယူနိုင်မည်လဲ ဆိုသည်မှာ ဘယ်ဖောင့်တွေက ယူနီကုဒ်စီးမျဉ်းကို လိုက်နာသလဲ ဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ ကျွှန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးသော ကို Lionlayers ရေးသားသော "Myanmar Fonts which follow Unicode rules" ဘလောဂ်မှရေးသားချက်များကို ပြန်လည်ကိုးကားပါမည်။
Myanmar Fonts which follow Unicode rules
Myanmar3 yes no yes LGPL, CC3.0 code.google.com Myanmar NLP
Masterpiece Uni Sans no yes yes GNU/Linux, OFL sourceforge.net Tin Myo Htet, Ngwe Tun, Sun Tun
Parabaik yes no yes GNU/Linux, OFL parabaik.info Ngwe Tun, Solveware Solution
Padauk yes no yes OFL scripts.sil.org Martin Hosken, SIL
Thanlwin yes no yes OFL thanlwinsoft.org Keith Stribley, Thanlwinsoft
WinuniInnwa yes no yes Free/Copyrighted myanmars.net Win Myanmar
Xenotype no yes no Commercial/Copyrighted xenotypetech.com XenoTypeTech
MyMyanmar yes yes yes Free/Copyrighted MyMyanmar.net MyMyanmar
Yunghkio yes no yes OFL Yunghkio Saiddzone
Panglong yes no yes GNU Lesser GPL Panglong Sit and Read
ပြီးလျှင် Zip ဖိုင်ဖြစ်နေပါက ပြန်ပြီးဖြေလိုက်ပါ။ အတွင်းတွင် ဖောင့်(ttf) ဖိုင်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။
ဝင်းဒိုးဆိုပါက အထက်ပါ ဖောင့်ဖိုင်ကို ညာကလစ်နှိပ်ပြီး အင်စတောလုပ်ရင်ပြီးပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် C:\_Windows\_Fonts မှာ အထက်ပါ ဖောင့်ဖိုင်ကိုသွားကူးလိုက်ရင် ပြီးပါပြီ။
ပြီးရင် ကိုယ်သုံးတဲ့ ဘရောင်ဇာရဲ့ ဖောင့်သတ်မှတ်ချက် တွေကို ပြန်ပြင် လိုက်ရင် ရပါပြီ။ Firefox ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
Java Developer Class
No52B(5F) Sanyeik Nyein 3&4 St, Insein Rd. Kamayut, Yangon.
Ph : 09 97110 2280
Java ကို စတင်လေ့လာမည်ဆိုလျှင်
Java နှင့် Object Oriented သဘော​တရား​
Project Coin 2
တတိယ ခြေလှမ်း XSL
MySql websocket dojo Java Tutorials Glassfish html5 မြန်မာဘာသာစကား java Fx Tech4mm Eclipse မြန်မာကျူတိုရီရယ် မြန်မာအိုင်တီပရို jquery spring Apache Tomcat